RW Kheyre oo kulan la yeeshay Taliyeyaal Ciidan (AKHRISO) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
RW Kheyre oo kulan la yeeshay Taliyeyaal Ciidan (AKHRISO)
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali kheyre ayaa Maanta kulan deg deg ah isugu yeeray Mas’uuliyiinta Taliska Ciidanka xoogga dalka iyo Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya.
Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Taliyaha Ciidanka xoogga dalka Daahir Aadan Cilmi(Indha-qarshe) iyo Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed( Amar-Dambe) iyo mas’uuliyiin kale.
“Waxaan maanta guddoomiyay shir aan isugu yeeray Taliska Ciidanka Xoogga Dalka iyo Wasaaradaha Gaashaandhigga & Maaliyadda oo aan uga hadleynay dib-u-habeynta ciidamada iyo howlgallada socda ee ka dhanka ah argagixisada ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Ra’iisul Wasaare kheyre ayaa Taliyaha xoogga dalka iyo Wasiirka Gaashaandhigga farey in la dardar geliyo howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Somalia holds counter terrorism summit in Mogadishu
Somali PM chairs meeting to discuss war on Al Shabaab